10 CODSIYADA UGU FIICAN EE LOOGU TALAGALAY BEERTA IYO BEERTA - WARARKA
Koraaya dhirta kala duwan ee dhirta iyo miraha iyo khudaarta cagaaran waxay noqotey hiwaayad fara badan oo malaayiin qof ah. Mid kasta oo ka mid ah kuwa bannaanka u qaadaan dadaal badan si ay u dalagaan dalagga ka fiican kuwa kale.
Da'da tiknoolajiyada macluumaadka sare, talooyin badan iyo talooyin waxtar leh oo ku saabsan dhirta sii kordhaya ayaa laga heli karaa internetka.
Runtii smartphone ama kiniin ahaan ayaa noqon kara caawiye wanaagsan, sababtoo ah maanta macaamiishu waxay abuurtay tiro badan oo codsiyo mobile ah kuwaas oo aad ka heli karto jawaabaha su'aalahaaga. Tixgeli arji yar oo ku guuleystay kuwa ugu caansan ee beerta.
Codsigan waa nooc ka mid ah shabakadaha bulshada ee bannaanka iyo bannaanka.
Diiwaangelinta sahlan ka dib, waxaad abuuri kartaa boggaaga oo sawirada dalaggaaga ah la daabacay oo loo diro shabakadaha kale ee bulshada.
Codsiga wuxuu leeyahay qaybo badan oo kala duwan. Mid ka mid ah qaybahaan waxay suurtogal u tahay in la sameeyo caanaha naaska, tusaale ahaan, "ats + berries" iyo ninkii beerta ka shaqaynayay ayaa arki doona liis ah cayayaanka suurtagalka ah iyo siyaabaha looga hortagi karo. Codsi isku mid ah ayaa kuu ogolaanaya inaad ka hesho jawaabaha su'aalihiisa ka yimaada kuwa kale.
Qaybta kale ee xiisaha leh ee codsiga - naqshadeynta naqshadeynta goobta mustaqbalka. Gardarro wuxuu awoodi doonaa inuu xisaabiyo tirada dhirta uu u baahan yahay oo uu helo muuqaal qiyaas ah oo ku saabsan qorshaha.
Codsiga wuxuu awood u leeyahay inuu raadiyo ereyada muhiimka ah. Beerta jecel beerashada iyo goosashada goosashada ayaa sidoo kale laga heli karaa lifaaqa. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, waxaad mar walba weydiisan kartaa khabiir ku takhasus gaar ah.
Fikradaha naqshadeynta muuqaalka
Mawduucan waxaa loogu talagalay tiro badan oo ka mid ah codsiyada mobile. Arjigaani waa mid ka mid ah kuwa ugu xogta badan iyo isbarbar dhigga ay ka mid yihiin dhiggooda.
Codsigaan wuxuu leeyahay qaybo badan oo leh sawirro fikrado naqshadaysan oo kala duwan. Sida ku qoran sawirka waxaad arki kartaa faallooyin badan oo ay isticmaalaan kuwa kale.
Sawirada waxaa lagu sameeyey tayo wanaagsan waxayna kuu ogolaaneysaa inaad aragto faahfaahinta ugu yar ee naqshadda dhismaha. Waxa kale oo suurtagal ah in lagu muujiyo ikhtiyaarada naqshadaha aad jeceshahay inay saaxiibo kuugu soo diraan sawir ku saabsan shabakadaha bulshada.
Si hawlgalka saxda ah ee codsiga noocan oo kale ah, waxaad u baahan tahay casriga wax soo saarka ama kiniiniga iyo helitaanka internetka xawaaraha sare, haddii kale isticmaaluhu ma awoodi doono inuu arko sawirada.
Nuxurka codsigan waa mid sahlan. Baxxiruhu wuxuu u baahan yahay inuu galo macluumaad ku saabsan dhirta uu leeyahay iyo barnaamijku wuxuu samayn doonaa jadwal lagu daryeelayo.
Codsiga wuxuu leeyahay karti u leeyahay inuu xusuusiyo ninkii beerta ka shaqaynayay ee taariikhda shaqada lagama maarmaanka ah.
Horumarinta waxay ku andacoodaan in codsigan uu ku jiro dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee daryeelka dhirta. Dhammaan talooyinka waxay ku salaysan yihiin waayo-aragnimada beeraley xirfad leh.
Adigoo rakibaya codsigan, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu heli doonaa macluumaad cusub oo ku saabsan dhirta aad jeceshahay, ka baro sifooyinka diyaarinta beerta xilliga qaboobaha, xaaqidda, gooye iyo beerista dalagyada caanka ah.
Waqtiga Guga ("Time Garden")
Codsigan moobiilka ayaa ah adeege ka shaqeeya xannaaneeyaha oo buuxa. Tilmaamuhu waa - liis badan oo dhirta, sameynta qoraallo iyo sawir aad u gaar ah.
Codsiga waxaad u baahan tahay inaad gasho dhammaan taariikhaha muhiimka ah: beeritaanka, heerkulka hawada, qoyaanka.
Barnaamijku wuxuu siin doonaa tilmaam marka ay wanaagsan tahay in lagu wareejiyo abuurka guriga ama waddada, bilowga beergooyska.
Nidaamka bilaashka ah ee codsigu wuxuu shaqaynayaa 30 maalmood, markaa waa inaad iibsataa mid lacag ah.
Tani waa kalandarka caadiga ah ee labiska. Codsigaan wuxuu qaadan doonaa xasuus yar, sidaas darteed si fudud ayaa loogu rakibi karaa qalab kasta.
Ka dib markii la furo codsiga, daaqad ayaa la muuqata bisha xigta. Maanta codsiga waxaa lagu muujiyey casaan. Sidoo kale tilmaamayaa wejiga wajiga hadda ee bisha. Calaamadda «i» ayaa kuu oggolaan doonta inaad ogaato macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan hoose ee ninkii beerta ka shaqaynayay.
Muujinta maalinta doorashada gaarka ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad barato liiska shaqooyinka wanaagsan. Arjiga ayaa si fudud lagama maarmaanka u ah kuwa bannaanka u ah ee ka mas'uulka ah dhammaan hawlaha goobta.
Tilmaamaha Dhirta Beeraha
Arjiga Ingiriisku wuxuu u qaybsan yahay dhowr qaybood waxayna ku jiraan macluumaad taariikheed oo ku saabsan cagaarka caanka ah, dhirta, geedo, ubaxyo.
Tilmaanta dhirta waxaa ku jira sifooyinka, waqtiga ubax, xaaladaha sii kordhaya, waraabinta iyo beerashada.
Codsi aad u fiican, oo leh macluumaad badan oo muhiim ah oo faa'iido u leh kuwa ku hadla Ingiriisiga. Si kastaba ha noqotee, haddii loo baahdo, marwalba waad isticmaali kartaa turjumaanka.
Codsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad barato qaabka beerta bilawga ah ee asaasiga ah ee waraabinta iyo koritaanka dhirta. Ubaxyada waaweyn ayaa loo soo diri karaa sawirrada asxaabta iyo aqoonta.
Codsiga wuxuu abuuraa xasuusta iyo dareenka, maxaa yeelay haddii qofku waraabiyo dhirta dhijitalka waqtigiisa, ma ilaawi doono kuwa dhabta ah.
Codsiga waxaa loogu talagalay dadka jecel inay wax kasta oo gacmahooda ku abuuraan.
Codsiga waxaa ku jira fikrado badan iyo tallaabooyin tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay sameynta farshaxan, saliida, qalabka elektarooniga ah ee guriga lagu sameeyo, qalabka beeraha iyo guryaha. Sawirada caawimaadda si buuxda u fahmi kara habka loo soo saarayo nooc muunad ah.
Codsigaani waa nooca elektarooniga ah ee joornaalka isla magaca. Codsiga laftiisa waa bilaash, laakiin mid kasta oo ka mid ah joornaalka waa in la iibsadaa. Qiimaha hal qol ayaa kala duwan 75 rode.
Developers of codsiyada casriga ah fiiro gaar ah u ah abuurista alaabooyin cusub oo kala duwan ee bannaanka iyo bannaanka u. Nadiifiye kastaa wuxuu awood u leeyahay in uu soo qaado codsiyada xiiso leh isaga oo ka yimid noocyada kala duwan ee la soo bandhigay. Halista kaliya ayaa ah in barnaamijyada intooda badan lagu daabaco Ingiriis, laakiin xitaa aqoonta asaasiga ah ee manhajka dugsiga ayaa ku filan in lagu kala saaro.